सहकारीमार्फत आर्थिक विकास हुन्छ | Sahakari Nepal
सहकारीमार्फत आर्थिक विकास हुन्छ
प्रतिनिधिसभा सदस्य, तनहुँ क्षेत्र १
१. सहकारीमार्फत आर्थिक विकास कसरी सम्भव छ ?
सहकारीमार्फत आर्थिक विकास सम्भव छ । मलाई पनि सहकारी सञ्चालन गरेको अनुभव छ । काठमाडौंमा रहेको रोयल बहुउद्देश्यीय सहकारीको अध्यक्ष भएर मैले काम गरिसकेको छु । सहकारी आर्थिक विकासका लागि गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । सहकारीले जीवनस्तर उकास्ने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेमा कुनै शंका छैन तर राज्यले सहकारीमैत्री नीतिनिर्माण गर्न आवश्यक छ । सहकारीलाई सबल खम्बाको रूपमा स्थापित गर्न मेरो प्रत्यक्ष भूमिका हुनेछ ।
२. तपाईंले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै पराजित गर्नुभयो, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
उहाँलाई मैले काका भनेर सम्बोधन गर्छु । उहाँले मलाई राम्रोसँग काम गर्नुहोला भनेर शुभकामना दिनुभएको छ । यसबाट म असाध्यै खुसी छु । जुन विश्वास मलाई मतदाताले गरे, त्यो असाध्यै ठूलो जिम्मेवारी हो । तर अब जितेपछि म सबैको मान्छे हुँ । मलाई कसले भोट दियो वा दिएन भन्दा पनि म सबैको साझा भएर काम गर्ने गरी अघि बढेको छु । मैले देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसमा म प्रतिबद्ध छु । मलाई विश्वास छ, सहकारीकर्मी साथीहरूले मलाई औधी माया गर्नुहुन्छ । अन्य विचारका साथीहरूले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ । म उहाँहरूको विश्वास डग्मगाउन दिने छैन ।
३. सहकारीलाई बलियो अर्थतन्त्रको लागि साझेदार कसरी बनाउन सकिन्छ ?
सहकारी अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने बलियो आधार हो । सहकारीबिना अर्थतन्त्र परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सहकारीलाई खासगरी स्थानीय तहले महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा लिन सक्छ । म अहिले मतदातामाझ पुगिरहेको छु । केही समय मतदातासमक्ष पुगेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिइरहेको छु । अब मेरो पहिलो काम बाटोघाटोको स्तरोन्नति हुनेछ । प्रसिद्ध तीर्थस्थल छाब्दीमार्गको कालोपत्रे मेरो प्राथमिकतामा छ । बाँकी कुराका लागि अब सरकार बन्दै छ । त्यसपछि पाँचवर्षे गुरुयोजना बनाएर म मेरो क्षेत्रको विकासको प्राथमिकता तोक्नेछु । पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन, युवा रोजगारी तथा घुमाउने घाटमा पुलको कामलाई छिटो पार्न मेरो भूमिका रहनेछ र यसमा सहकारीलाई कसरी सहभागी गराउने भन्नेमा ध्यान पु¥याउँछु ।
४. तपाईंसँग जनताको अपेक्षा क के छन् ?
सबैभन्दा धेरै माग बाटोको छ । कतिपय ठाउँमा ट्रयाक खोलिए पनि व्यवस्थित छैन । गाडी चल्ने अवस्था छैन । कलेस्तीदेखि मिर्लुङसम्म एउटासम्म पनि एम्बुलेन्स छैन । जनतालाई आपत्कालीन स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । युवा बेरोजगारीको समस्या ठूलो छ । यसका लागि सीटीईभीटीबाट प्राविधिक तथा सबओभरसियरसम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा जोड दिनेछु । पर्यटन विकास गर्दै बेरोजगार युवालाई पर्यटनमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । औद्योगिक क्षेत्र तनहुँमा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कृषिको आधुनिकीकरणको पनि माग आएको छ । समग्रमा विभिन्न माध्यमबाट १० हजारलाई रोजगारी दिलाउन मेरो प्रयास रहनेछ ।
५. आगामी दिनमा सहकारीसम्बद्ध निकायकोे कुनै पदमा रहेर काम गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
यो मेरो व्यक्तिगतभन्दा पनि वाम गठबन्धनको कुरा हो । नेताले गर्ने निर्णय स्वीकार हुनेछ । म जनताले देखिने गरी काम गर्ने ठाउँमा जिम्मेवारीको पर्खाइमा छु । मलाई शीर्ष नेतृत्वले पनि सोहीअनुसार जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिनुभएको छ । 